एकीकरणप्रति समाजवादी र राजपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि, पार्टी फुटाउने तयारी - Jhilko
एकीकरणप्रति समाजवादी र राजपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि, पार्टी फुटाउने तयारी
जनकपुर, ११ वैशाख । अप्रत्यासित रुपमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच बुधवार राति एकीकरण गर्ने सहमतिसँगै ती दुबै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ेको छ ।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी र राजपाभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टी फुटाउने करिवकरिव निश्चित भएपछि हतारहतार दुबै पार्टीले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको हो । दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले पार्टी एकता ऐतिहासिक भएको दावी गरिरहदा त्यही पार्टीका केही नेताहरु पार्टी फुटाउने कसरतमा जुटेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर लागू भए लगत्तै समाजवादी पार्टी र राजपाभित्र हलचल मच्चिएको छ । समाजवादी र राजपाले एकीकरणका लागि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बोलाइएको बैठकमा राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्यहरु अनिल झा र राजकिशोर यादव तथा समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादव लगायतका नेताहरु अनुपस्थित रहेका थिए । यसबाट पनि ती दुबै दलभित्र एकीकरणको बिषयलाई लिएर बिवाद रहेको बुझन सकिन्छ । ती सबै नेता राजधानी काठमाण्डौमै रहे पनि एकीकरण गर्न बोलाइएको बैठकमा अनुपस्थित भएर असन्तुष्टिको संकेत दिएका छन् ।
हुन त राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्यद्वय राजकिशोर र अनिल दुबै समाजवादीसँग यसअघि पनि एकता गर्ने पक्षमा थिएनन् । समाजवादीसँग एकिकरण गर्नुअघि पार्टीको महाधिबेशन गर्नुपर्ने र त्यसपछि सबै नेताको सही व्यवस्थापन हुने गरी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा यादव र झा थिए । फुटको संघारमा पुगेको दुबै पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएर हतारहतार एकीकरण गरिए पनि थुप्रै नेताहरु अझै एकीकरणप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको राजपाका एक नेताले बताएका छन् । एकीकरणका लागि बुधवार राति बोलाइएको बैठकमा झा र यादव दुबै नेतालाई पटकपटक फोन गरेर बैठकमा बोलाए पनि उनीहरु बैठकमा नआएको ती नेताको भनाइ छ । यसबाट पनि राजपाका अध्यक्ष मण्डल सदस्यद्वय यादव र झा एकीकरणको बिषयमा सन्तुष्ट नरहेको धेरैको बुझाइ छ । पार्टी एकिकरणप्रति दुबै नेता असन्तुष्ट रहेको र भित्रभित्र पार्टी फुटाउनका लागि लागेको श्रोतको दाबी छ । हामीले पनि दुबै नेतालाई फोन गरेर पार्टी एकीकरणको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि दुबै जना फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसले पनि श्रोतको दाबीलाई बल पुगेको छ ।
राजपाभित्र मात्रै होइन,समाजवादीभित्र पनि एकीकरणको विषयमा असन्तुष्टि बढेको पाइएको छ । केही समयदेखि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट देखिएका उपाध्यक्ष रेणु यादव र नेता मोहम्मद इस्तियाक राइनसहितका नेताहरु पार्टी बिभाजन गरी संघीय सरकारमा समाबेश हुने संकेत दिएको छ ।
पार्टी संघीय सरकारमा गएका बेला आफुलाई मन्त्री नबनाएको र पार्टीको प्रदेश २ को नेतृत्वका बारेमा गरिएका निर्णय जस्ता कुराले उपाध्यक्ष रेणु यादव अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट बनेको श्रोतको दाबी छ । यसैको आक्रोशमा रेणु यादवले एक महिनाअघि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर पार्टी फुटाउनेसम्मको चेतावनी दिएकी थिइन । तर, पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुको आग्रहमा रेणुले राजीनामा फिर्ता लिएर तत्कालका लागि पार्टी बिभाजनको निर्णयबाट पछि हटेकी थिइन ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीका नेता इस्तियाक राइन पनि असन्तुष्ट छन् । यस्तै पार्टी एकलौटी चलाएको र उचित अवसर नदिएको भन्दै सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादवले समेत सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टीका नेतृत्व पंक्तिबाट केही आश्वासन पाएपछि राजीनामा फिर्ता लिए पनि त्यसयता उनी पार्टीको कार्यमा खासै क्रियाशील छैनन् । त्यसैले यी नेताहरु पार्टी फुटाएर छुट्टै पार्टी बनाउने कसरतमा लागेको एक नेताले बताए । असन्तुष्ट समूहका पक्षमा आठ जना सांसद रहेको र उनीहरु छुट्टै बैठक बसेर पार्टी फुटाउने तयारी गरिरहेको ती नेताको कथन छ । उपेन्द्र यादव पक्षले भने उनीहरुको छ जनाभन्दा एक जना पनि बढी नभएको दावी गरेको छ ।
दुवै पार्टीका एकथरि नेताहरु जसरी एकतामा मध्यराथि सहमतिमा पुगे, असन्तुस्ट पक्ष पनि कुनै पनि मध्यराति एकतामा पुगे पनि आश्चर्य हुँदैन राजपाका एक नेताले बताए ।
'प्रधानमन्त्रीले दलको नाडी छाम्नमात्र अध्यादेश ल्याएका हुन ?'
पत्रकारलाई तत्काल पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न आग्रह
सडक कानुन उल्लंघन गरी पार्क गरिएको मन्त्रीकै गाडीमा प्रहरीले...
विश्वका उच्चपदस्थ व्यक्तिको भ्रमण नेपालको लागि ठूलो सफलता:...
आफ्नो ठाउँमा भएको काममा एक कन्चो पनि बजेट तलमाथि हुन नदिन जनताले कडा निग्रानी गर्न...
चट्टानको रूपमा हिमयुगको समुद्री पानी हिन्द महासागरबाट फेला
वैज्ञानिकहरूले चट्टानको रूपमा हिमयुग बेलाको सामुद्री पानी हिन्द महासागरबाट फेला...
आठ किलोग्राम सुनसहित दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ
पक्राउ परेका व्यक्ति सुनको मालिक हुन् वा अरु हुन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको...